မဟာမုနိ ဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူသူများတွင် အမျိုးသမီးပုံစံ ပြင်ဆင်ခြယ်သ ထားသူများကို တာ?? - Yangon Media Group
မဟာမုနိ ဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူသူများတွင် အမျိုးသမီးပုံစံ ပြင်ဆင်ခြယ်သ ထားသူများကို တာ??
မန္တလေး၊ သြဂုတ် ၅
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းဒေသရှိ တောင်ပြုန်း ပွဲတော်ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း မန္တလေးမြို့၏ အထင်ကရမဟာ မုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး ကိန်းဝပ်စံပါယ်ရာကျောင်းတော်ကြီးနှင့် ပရိဝုဏ်အတွင်းကို လုံခြုံရေးအင် အားပိုမိုတိုးချဲ့ချထား၍ စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးပုံစံပြင်ဆင်ခြယ်သထားသော အမျိုးသားများကို ရွှေသင်္ကန်းကပ် လှူခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ဘုရားကြီးဂေါပကအဖွဲ့မှ သိရသည်။
”ဘုရားဖူးတွေထဲမှာ အဖျက်အမှောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ ဒုစရိုက်ကျူး လွန်မယ့်သူတွေ ရောယောင်ပါဝင်လာမှုမရှိအောင် ပွဲတော်ကာလပြီးတဲ့အထိ လုံခြုံရေးပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ လုံခြုံရေး တိုးချဲ့ချထားသွားမှာဖြစ်သလို တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဃဃွှဠ ကင်မရာတွေကတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ခန်းကနေအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပြုန်းပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့သူတွေအများစုဟာ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကို အရင် ဦးတိုက်ပူဇော်တဲ့ဓလေ့ထုံးစံရှိ တာကြောင့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူ ပူဇော်မယ့်သူတွေထဲမှာ မိန်းမလို ပုံစံပြင်ဆင်ခြယ်သထားတဲ့သူတွေကို တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးသွား မှာဖြစ်ပြီး မိုင်းရှာစက်နဲ့ရှာဖွေခံ ပြီးထားတဲ့အမျိုးသားတွေကိုသာ ပလ္လင်ပေါ်ကိုတက်ရောက် သင်္ကန်းကပ်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မဟာမုနိဘုရားကြီး၊ ဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းက သြဂုတ် ၅ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ရပ်ဝေးဘုရားဖူးဧည့်သည်များနေထိုင်ရေး အဆင်ပြေစေရေး အတွက်သာသနာ ၂၅ဝဝ ဓမ္မာရုံတွင် တည်းခိုခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကာ အဆင့်မြင့်ယာဉ်ရပ်နားကွင်းတစ် ခုနှင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အခမဲ့သန့်စင်ခန်းများကိုလည်း အရှေ့ ၄၅ တာကွင်းနှင့် ပရိဝုဏ်အ နောက်မြောက်ထောင့်အပြင် မြောက်ဘက်စောင်းတန်းအရှေ့တို့တွင်စီစဉ်ပေးထားကြောင်း သမိုင်းပြတိုက်နှင့် ဓမ္မာစကြာပြ တိုက်တို့အပါအဝင် ရှေးဟောင်း ပြတိုက်ကြီးများကို ခေတ်နှင့်အညီ အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မဟာမုနိဘုရားကြီးသို့ နေ့စဉ် နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ၁ဝဝ နီးပါးနှင့် ပြည်တွင်းဘုရားဖူး ၅ဝဝဝ နီးပါးအထိ လာရောက်ဖူး မြော်ကြပြီး လုံခြုံရေးကင်မရာများကို ဂန္ဓကုဋိတိုက်အပြင် လူစည်ကားရာ ပြတိုက်များနှင့်စောင်းတန်းများတွင်ပါ စုစုပေါင်းအလုံး ရေ ၄၈ လုံးအထိတိုးချဲ့ တပ်ဆင်ကာ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရေနံစိမ်း သယ်ဆောင်သည့်ယာဉ်များ သတင်းပို့ရမည့် နေရာတွင် သတင်းမပို့ပါက ယာဉ်ကို တစ်လပိတ်သိမ်
မြင့်မြတ်၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ ပါဝင်ထားသည့် 'မင်္ဂလာခုတင်' ဟာသရုပ်ရှင် ဇာတ်ကာ?
တိုင်းရင်းသား ကလေးငယ်များ ပညာသင်စတွင် ဘာသာစကား ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရ
၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား သီချင်းကို ဝီလ်စမစ် သီဆိုမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးပါက အဂတိလိုက်စားမှုများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အေ?
လက်မှတ် ထိုးထားသော ဂျာစီကို ရက်ဖို့ဒ်ထံ ရီးရဲလ် တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုပေးပို့
၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် ဗိုလ်စွဲနိုင်ရေးက နောက်ဆုံး အခွင့်အရေးဟု မက်ဆီ သတိပေး